လူမြင်ကွင်းမှပျောက်နေတဲ့ ကင်မ်ဂျုံအန် ကွယ်လွန်သွားပြီလား? ဘယ်နေရာ ရောက်နေလဲ?
အရေးပါတဲ့ နိုင်ငံတော်အခမ်းအနားတွေမှာ မတွေ့ခဲ့ရပြီးနောက် ခန့်မှန်းမှုတွေ ပိုမိုမြင့်တက်နေပါတယ်။
မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်မ်ဂျုံအန်ကို နောက်ထပ် အရေးပါတဲ့ နိုင်ငံတော်အခမ်းအနားတစ်ခုမှာ မတွေ့ခဲ့ရပြီးနောက် ၎င်းရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခန့်မှန်းမှုတွေ ပိုမိုမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။
သတင်းအမျိုးမျိုးထွက်ပေါ်နေတဲ့ ကင်မ်ဂျုံအန်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ
TMZ, Mirro နဲ့ Taiwan News ကဲ့သို့ သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်အချို့ကတော့ ကင်မ်ဂျုံအန် ကွယ်လွန်သွားပြီ သို့မဟုတ် တုံ့ပြန်မှုမရှိတော့ဘဲ ဦးနှောက်သေသွားပြီလို့ နောက်ဆုံးရသတင်း ဖော်ပြမှုတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် လက်ရှိအချိန်အထိတော့ ကင်မ်ဂျုံအန် မည်သည့်နေရာမှာ ရောက်ရှိနေကြောင်းနဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို အတိအကျ အတည်ပြု သိရှိနိုင်ရန် ခက်ခဲနေပါတယ်။
ကင်မ်ဂျုံအန်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ ဆိုးရွားနေပြီး အသက်အန္တရာယ်ရှိနေကြောင်း သတင်းတွေ ယခုသီတင်းပတ် အစောပိုင်းမှာကတည်းက စတင်ထွက်ပေါ်နေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသက် ၃၆ နှစ်အရွယ် ကင်မ်ဂျုံအန်ဟာ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူခဲ့ပြီးနောက် အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတဲ့အထိ နေမကောင်းဖြစ်နေကြောင်း CNN သတင်းဌာနက အမေရိကန်အစိုးရ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကို ကိုးကားပြီး ဧပြီ ၂၁ ရက်နေ့မှာ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးနဲ့ နီးစပ်မှုရှိတဲ့ ဒုတိယ သတင်းရင်းမြစ်ကလည်း အမေရိကန်အစိုးရက ကင်မ်ဂျုံအန်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ သတင်းတွေကို အနီးကပ် စောင့်ကြည်နေကြောင်း CNN ကို ပြောခဲ့ပါတယ်။ နောက်ထပ် အမေရိကန်အစိုးရ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကလည်း ကင်မ်ဂျုံအန်ရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်မှုများရှိနေတာ မှန်ကန်ကြောင်း သို့သော် အခြေအနေ မည်မျှပြင်းထန်ကြောင်းကိုမူ သိရှိနိုင်ရန်ခက်ခဲကြောင်း CNN ကို ဧပြီ ၂၀ ရက်နေ့မှာ ပြောခဲ့ပါတယ်။
စနေနေ့ (ဧပြီ ၂၅ ရက်) က မြောက်ကိုရီးယားစစ်တပ် တည်ထောင်ဖွဲ့စည်းမှု ၈၈ နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာမှာလည်း ကင်မ်ဂျုံအန်ကို မတွေ့ခဲ့ကြောင်း တောင်ကိုရီးယားမီဒီယာက သတင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ Reuters သတင်းဌာနရဲ့ ဧပြီ ၂၅ ရက်နေ့ သတင်းမှာတော့ တရုတ်အစိုးရက ကင်မ်ဂျုံအန်ကို အကြံပေးရန်အတွက် ဆေးဘက်ကျွမ်းကျင်သူများ အပါအဝင် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို မြောက်ကိုရီးယားသို့ စေလွှတ်လိုက်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
အချို့ သတင်းမီဒီယာကလည်း ကင်မ်ဂျုံအန်ဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မခံရစေရန် လူတွေနဲ့ ခပ်ခွာခွာနေခြင်းမျှသာ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဖော်ပြမှုတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ မြောက်ကိုရီးယားမှာ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိတာကြောင့် COVID-19 ကပ်ရောဂါဖြစ်စေတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှု အခြေအနေကို အတည်ပြု သိရှိနိုင်ရန် ခက်ခဲပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်အထိ မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်မ်ဂျုံအန် သေဆုံးကြောင်း ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ သတင်းတွေ မရှိသေးပေမဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတော့ hashtag #KIMJONGUNDEAD က ပျံ့နှံ့ထွက်ပေါ်နေကြောင်း Forbes မဂ္ဂဇင်းက ပြောပါတယ်။
မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ ဆက်သွယ်မှုရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေရဲ့ ထင်မြင်မှုအချို့
တောင်ကိုရီးယား၊ တရုတ်နဲ့ အမေရိကန် အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေ အားလုံးက ကင်မ်ဂျုံအန်ဟာ ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူခဲ့ပြီးနောက် အပြင်းအထန် နေမကောင်းဖြစ်နေကြောင်း ထွက်ပေါ်လာတဲ့ သတင်းတွေအပေါ် မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကင်မ်ဂျုံအန်ဟာ သက်ရှိထင်ရှား ရှိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ ထောက်လှမ်းရေးသတင်း အားလုံးက တင်ပြထားကြောင်းနဲ့ မကြာမီ အများပြည်သူမြင်ကွင်းမှာ ထွက်ပေါ်လာဖွယ်ရှိကြောင်း တောင်ကိုရီးယား သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကို ကိုးကားပြီး Reuters က ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရန့်ကလည်း ကင်မ်ဂျုံအန် သေလုမြောပါးဖြစ်နေတဲ့ သတင်းတွေကို မမှန်ကန်ဘူးလို့ ထင်မြင်ကြောင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။ ထိုအတောအတွင်း အမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးနဲ့ နီးစပ်တဲ့ ထရန့်အစိုးရ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကတော့ ကင်မ်ဂျုံအန်မှာ ကျန်းမာရေးပြဿနာများရှိပြီး အပြင်းအထန် နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့ အထောက်အထား မရှိဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
လူအများမြင်ကွင်းကနေ ပျောက်ကွယ်နေတဲ့ ကင်မ်ဂျုံအန်
ကင်မ်ဂျုံအန်ကို အများမြင်ကွင်းမှာ နောက်ဆုံးအကြိမ် မြင်တွေ့ရမှုဟာ ဧပြီ ၁၁ ရက်နေ့က မြောက်ကိုရီးယား အာဏာရ အလုပ်သမားပါတီ (Workers' Party) မူဝါဒရေးရာကော်မတီ အစည်းအဝေးတစ်ရပ်ကို တက်ရောက်ခဲ့စဥ်က ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအစည်းအဝေးသတင်းကို မြောက်ကိုရီးယား အစိုးရသတင်းဌာနက ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ထို့နောက် ဧပြီ ၁၄ ရက်နေ့မှာ မြောက်ကိုရီးယားက နိုင်ငံတည်ထောင်သူနဲ့ ကင်မ်ဂျုံအန်ရဲ့ အဘိုးဖြစ်သူ ကင်မ်အီလ်ဆွန်းရဲ့ မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ် ဂုဏ်ပြုမှုအဖြစ် တာတိုပစ် ခရုစ်ဒုံးကျည်အချို့ ပစ်လွှတ်စမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်။ ယခင်က ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်စမ်းသပ်မှုတွေကို မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်မ်ဂျုံအန် တက်ရောက်ခဲ့လေ့ရှိပေမဲ့ ယခုတစ်ကြိမ်မှာတော့ တက်ရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ အစိုးရသတင်းဌာနကလည်း ထိုသတင်းကို မဖော်ပြခဲ့ပါဘူး။
ကင်မ်ဂျုံအန်ရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ နှလုံးခွဲစိတ်မှုခံယူခဲ့ရတဲ့ သတင်း
မြောက်ကိုရီးယားမှ ဘက်ပြောင်းခိုလှုံသူတွေရဲ့ Daily NK သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်က ဖော်ပြခဲ့မှုအရ မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်မ်ဂျုံအန်ဟာ မကြာသေးမီက နှလုံးခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူခဲ့ပြီးနောက် ပြုံယမ်းမြို့ပြင်ရှိ အပန်းဖြေစံအိမ်တစ်ခုမှာ ဆက်လက် နေထိုင်လျက်ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။
မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ဟာ ကျန်းမာရေးကောင်းသူတစ်ယောက်ပုံစံမျိုး မဟုတ်ဘဲ အဝလွန်နေသူလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ မကြာခဏ စီးကရက်သောက်နေတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေလည်း ထွက်ပေါ်လာတတ်ပြီး အရက်နဲ့ ကယ်လိုရီများတဲ့ အစားအစာတွေကို ကြိုက်တတ်သူလို့လည်း သတင်းကြီးပါတယ်။ ကင်မ်ဂျုံအန်ဟာ အသက် ၃၀ ကျော်အရွယ်ဖြစ်ပေမဲ့လည်း တုတ်ကောက်နဲ့ လမ်းလျှောက်နေတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကိုလည်း တွေ့ရတတ်တယ်လို့ CNA သတင်းဆောင်းပါးတစ်ခုမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ကင်မ်ဂျုံအန် စီးနင်းလေ့ရှိတဲ့ အထူးရထားတစ်စင်းကို မြောက်ကိုရီယားရှိ အပန်းဖြေမြို့မှာ ယခုသီတင်းပတ်အတွင်း တွေ့ခဲ့ရကြောင်း ဝါရှင်တန်အခြေစိုက် မြောက်ကိုရီးယားစောင့်ကြည့်အဖွဲ့က ဂြိုဟ်တုဓာတ်ပုံများကို ကြည့်ရှုသုံးသပ်ပြီး ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ ဝါရှင်တန်အခြေစိုက် 38 North အဖွဲ့က ဧပြီ ၂၅ ရက်နေ့မှာ ပြောကြားမှုအရ ကင်မ်ဂျုံအန်မိသားစု အသုံးပြုရန်အတွက် သီးသန့်ထားရှိတဲ့ ဝန်ဆန်မြို့ရှိ ဘူတာရုံမှာ ဧပြီ ၂၁ ရက်နဲ့ ၂၃ ရက်နေ့က အထူးရထား ရပ်နားထားတာကို တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Photo: KCNA, Reuters, AP
(ယခု သတင်းဆောင်းပါးတင်ချိန်အထိ ကင်မ်ဂျုံအန်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို အတိအကျ မသိနိုင်သေးဘဲ နောက်ဆက်တွဲ သတင်းများရှိလာနိုင်ပါတယ်)